Izindaba - Ukuthengiswa kwezimoto ezintsha zaseYurophu kukhuphuke ngo-1.1% unyaka nonyaka ngoSepthemba: ACEA
Ukubhaliswa kwezimoto zase-Europe kukhuphuke kancane ngoSepthemba, ukwanda kokuqala kulo nyaka, idatha yezimboni ikhombise ngoLwesihlanu, iphakamisa ukululama emkhakheni wezimoto kwezinye izimakethe zase-Europe lapho ukutheleleka kwe-coronavirus bekuphansi.
NgoSepthemba, ukubhaliswa kwezimoto ezintsha kukhuphuke ngo-1.1% unyaka nonyaka kuya ezimotweni eziyizigidi eziyi-1.3 e-European Union,
IBrithani kanye ne-European Free Trade Association (EFTA) amazwe, izibalo ezivela ku-European Automobile Manufacturers 'Association (ACEA) zikhombisile.
Izimakethe ezinhlanu ezinkulu zaseYurophu, noma kunjalo, zathumela imiphumela exubile. ISpain, i-United Kingdom neFrance babike ukulahleka, ngenkathi ukubhaliswa kukhuphuka e-Italy naseJalimane, idatha ikhombisa.
Ukuthengiswa kweVolkswagen Group neRenault kukhuphuke ngo-14.1% no-8.1% ngoSepthemba ngokulandelana, kanti iPSA Group ibike ukwehla ngo-14.1%.
Abakhiqizi bezimoto zikanokusho babhala ngokulahleka ngoSepthemba kanti ukuthengiswa kweBMW kwehle ngo-11.9% kwathi imbangi yayo uDaimler yabika ukwehla ngo-7.7%.
Ezinyangeni eziyisishiyagalolunye zokuqala konyaka, ukuthengisa kwehle ngo-29.3% njengoba ukuvalwa kwe-coronavirus kuphoqa abenzi bezimoto ukuba bavale izindawo zokubukisa kulo lonke elaseYurophu.
Isifutho sokushaqeka sifakwe phakathi komzimba wemoto nethayi, kanye nesiphethu. Ukunwebeka kokushaqeka okumanzi entwasahlobo ebusweni bomgwaqo, noma kunjalo, kubangela ukuthi imoto idlidlize ngenxa yezimpawu zayo zokuqina. Le ngxenye isebenza ekuthuthumezeni okumanzi ibizwa ngokuthi "i-shock absorber", futhi i-viscous resistance force ibizwa ngokuthi "amandla okunciphisa".
Ama-absorber absorck angumkhiqizo obucayi onquma uhlamvu lwemoto, hhayi ngokuthuthukisa ikhwalithi yokugibela kuphela kodwa nangokusebenza ukulawula isimo sengqondo nokuzinza kwemoto.
Isifaki seHood Shock, Ihabhu Lesondo, Iqhubu langaphambili Lokuqondisa, ITire Ball Joint, I-Rubber ye-Shock Absorber, I-Bolt Shock Absorber,